kolikoly : manentana antsika hiaino ny fotoambita 41 fa tena tsara !!!
Date: 12 février 2018 - 16:48
napetraky ny filoha rajao mazava fa misy tokoa ny kolikoly eto am tsika !!!
- tsy ho voavaha io raha tsy isika rht no mandray andraikitra !!!!
>> azo atao dia azo atao ny mitory ireo mpiasam-panjakana mitady kolikoly, hoy izy !!!!!
Re: kolikoly : manentana antsika hiaino ny fotoambita 41 fa tena tsara !!!
Date: 12 février 2018 - 16:51
azo atao dia azo atao ny mitory ireo mpiasam-panjakana mitady kolikoly hoy izy nefa hatramin'izao 4 taona zao mbola misokatra daholo famakafakana mbola tsy misy migadra aloha ny akama akama rehetra
Date: 13 février 2018 - 09:48
belapin> Teneno ny namanao: sao dia izay mitory indray no higadra?
Fa ao @ manodidina azy ao aloha no tokony ho modely voalohany @ ady @ kolikoly. Ataovy mangarahara dia asio "cellule anti-corruption" mitily sy manasazy izay tratra.
Dia atao toy izay daholo ny any @ Ministera sy Biraom-panjakàna, Tribonaly... rehetra any.
Ary izay tratra dia tena aseho ampahibemaso sy hita tsara mihitsy fa manefa ny sazy.
Rehefa mahita izany ny rehetra, mino aho fa hatahotra, dia hihena tsikelikely io.
SINON, fotoam-bita fampiesonana ny anao!!
>> Ohatran'ny hitako ireo olona ho voasazy eo raha tena hatao tokoa izany!!!
Par: beIapin >> tena marina tokoa fa ny kolikoly tsy voaringana ao anatin'ny fotoana fohy fa mila mandat maromaro sy fahavonoana ny filoha vao ringana io .
ka noho izany tokony hifarimbona isika vahoaka Malagasy miaraka @ Filoha Hery , hanafoana an'izany fomba ratsy zany . Manentana ihany koa ny tenako , mba mandray andraikitra @ fanomezana ny toro hevitra an'i gouvernementa .
fa ny kolikoly dia ady hiraisana io ka tokony hifarimbona
Date: 13 février 2018 - 10:14
proPouvoir << mba maromaroa ny toan'isé eto Madagasikara tanindrazan-tsika malala !!!
- zavatra roa no tena mahatonga ny kolikoly :
A/- te hahazo ilay zavatra (pap, certif,...) aingana ilay olona dia manome na takian'ilay P* vola !!!
B/- tsy ampy ny dossiers ilaina nefa maika ny hahazo ilay zavatra dia manome na takian'ilay P* vola !!!
- hita am ireo cas A et B ireo fa ny mandray anjara ao ny vahoaka mpanjifa !!!!
- solution v ????
=> ataovy ara-dalàna ny dossier-nao rhf te haka zavatra
=> aza miandry fotoana farany vo manao ny fangatahana
=> rhf ara-dalana ny pap-nao dia ilay fe-potoana sisa no mody ilain'i P* vanona anao
=> eto dia mila miady ny vahoaka mitaky zay fe-potoana ara-dalàna tokony hahazoana ilay zavatra !!!
=> mila mahasahy miteny oe mba "hajao ny lalàna fa ianareo anie ka mpiasam-panjakana e " !!!
=> raha ratsy loha moa i P* ka hitarazoka ny asany dia izy ihany no hifafa ny koiny !!!
=> afaka 1semaines na 1mois dia hifangongo ao aminy ao ny ttsiin'olona maro dia maro !!!
=> tsy maintsy ho tonga any am ambony ny situation ary ho sahirana i P* hanazava ny antony !!!
>> hivoatra ho azy moramora eo ny fomba fiasa eny am biraom-panjakana rht !!!
PS : azo apetraka kou ny lalàna oe : esorina am asany izany mpiasam-panjakana manao sahala P* !!!!!